Power Station-Power Station-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valizy no marika)
Fotoana: 2020-10-09 Hits: 39
Ny famokarana herinaratra izay mampiasa fanitarana hafanana etona mahazatra ho an'ny turbina no mbola fomba fanao miely indrindra sy nentim-paharazana hamokarana ny fangatahana fahefana lehibe ho an'ireo hetsika indostrialy sy ny fampiharana sivily.
Ny herinaratra mahazatra avy amin'ny solika fôsily dia manodidina ny 80% amin'ny famokarana herinaratra ary hijanona ho avo mandritra ny folo taona ho avy.
Fiaraha-miasa, fampiasana biomasse na fako hafa noho ny asan'olombelona dia mbola mitombo hatrany, manokatra fitakiana vaovao ho an'ny valves afaka manatona serivisy HT, mikoriana fotaka sy akora betsaka, ao anatin'izany ny fangatahana fanafanana distrika.
Ireo loharano azo havaozina izay efa mampiasa ny fiovan'ny toetr'andro toy ny toeram-pambolena amin'ny masoandro, ny geothermal dia mety mila valves manokana izay tafiditra ao anatin'ny sehatry ny famokarana Titan.
Tao anatin'izay folo taona lasa izay, ny zavamaniry mahazatra dia mila manatsara ny fahombiazany ary mampihena ny fandefasana entona amin'ny fitomboan'ny maripana sy ny tsindry miasa.
Noho izany, ny valves, turbines, ary tsindry hafa misy ampahany dia mila mivoatra amin'ny alàlan'ny fitaovana sy ny fomba famokarana izay manatsara ny fanoherana ireo trangan-javatra mampisavoana, manatsara ny tanjaka fiaretana ary manome antoka ny fiasa azo antoka ho an'ny fiainana antenaina amin'ny toe-javatra iasana vaovao.
Titan Valve, noho ny haitao mandroso sy ny famokarana, dia afaka manome fitakiana valizy feno ho an'ny famokarana herinaratra (tsingerina mahazatra sy fanatsarana hafanana, ao anatin'izany ny loharano azo havaozina sy ny fampiharana mifandraika). Titan Valve dia manana mari-pankasitrahana matihanina isan-karazany ao anatin'izany ny fireproofing, low-leakage, SIL, sns.
Taloha: tsy misy